Germany: Akpọrọ afọ abụọ maka asambodo ọgwụ mgbochi COVID-19 adịgboroja
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ kacha ọhụrụ na Germany » Germany: Akpọrọ afọ abụọ maka asambodo ọgwụ mgbochi COVID-19 adịgboroja
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Crime • Akụkọ kacha ọhụrụ na Germany • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Ihe Ndị Ruuru Mmadụ • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Technology • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Germany: Akpọrọ afọ abụọ maka asambodo ọgwụ mgbochi COVID-19 adịgboroja.
Mịnịsta na-ahụ maka ahụike na Germany na-apụ apụ Jens Spahn dọrọ aka ná ntị banyere “ebili mmiri nke anọ” nke ọrịa COVID-19 na-aga n'oge oyi, ma kwuo na ọnụ ọgụgụ dị ugbu a na ọnụọgụ - nke ruru ọkwa kachasị elu kwa izu na Mọnde kemgbe mmalite nke ọrịa a - na-ebugharị. site na ndị na-enweghị ọgwụ mgbochi.
Germany na-akwado usoro iwu ọhụrụ iji gbasaa usoro coronavirus n'ime afọ na-abịa.
Iwu ọhụrụ ga-enwe ntaramahụhụ siri ike maka onye ọ bụla ejidere ịgha ụgha nke akpọrọ 'passportvaccine'.
Iwu Nchekwa Ọrịa nke Germany ugbu a na-agwụ na Nọvemba 25, yabụ na iwu ọhụrụ a ga-ewebata na ịtụ vootu tupu ụbọchị ahụ.
Iwu Nchekwa Ọrịa nke Germany ugbu a na-agwụ na Nọvemba 25, na ndị omebe iwu obodo ahụ na-akwado iwu ọhụrụ iji gbasaa usoro mgbochi COVID-19 n'ime 2022.
Ndị isi ndọrọ ndọrọ ọchịchị si GermanyO yikarịrị ka gọọmentị mmekorita ewepụtala iwu ọhụrụ na-agbatị usoro coronavirus nke obodo n'ime afọ na-abịa ma tụpụta ntaramahụhụ siri ike, gụnyere oge mkpọrọ, maka onye ọ bụla na-ekpu COVID-19. akwụkwọ ịgba ọgwụ mgbochi ọrịas, nke a na-akpọkarị 'akwụkwọ ikike ngafe'.
Iwu ọhụrụ nke iwu ahụ ga-enwe nnukwu ntaramahụhụ ego na/ma ọ bụ ihe ruru afọ abụọ n'ụlọ mkpọrọ maka ndị ejidere na ha na-akpa asambodo ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa.
O yikarịrị ka ewebata na ịtụ vootu n'ime iwu ọhụrụ a tupu Nọvemba 25 - ụbọchị iwu COVID-19 nke obodo a ga-agwụ.
GermanyMịnịsta na-ahụ maka ahụike na-apụ apụ Jens Spahn dọrọ aka ná ntị banyere “ebili mmiri nke anọ” nke ọrịa COVID-19 na-aga n'oge oyi, ma kwuo na ọnụ ọgụgụ dị ugbu a na ọnụọgụ ikpe - nke ruru ọkwa kachasị elu kwa izu na Mọnde kemgbe mmalite ọrịa a - na-aga. ndị na-agbaghị ọgwụ mgbochi chụpụrụ.
Ịkparịta ụka n'iwu ọhụrụ a ejirila ndị otu SDP aka ekpe, ndị liberal Free Democrats na ndị Greens, bụ ndị kpọchiri na mkparịta ụka iji guzobe gọọmentị mmekorita kemgbe ntuli aka gọọmenti etiti nke Septemba.
Germany na-arụ ọrụ usoro asambodo ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa okpukpu abụọ iji bata ọtụtụ oghere ọha. A na-enye ndị gbara ọgwụ mgbochi ọrịa na ndị nwere ihe mgbochi sitere n'okike site na ọrịa gara aga nnwere onwe, ebe ndị nwere ike gosipụta ule na-adịghị mma nọ n'okpuru mmachi siri ike, ma achọrọ na steeti ụfọdụ ka ha nọrọ n'ime ụlọ.
Na steeti German ụfọdụ, azụmaahịa nwere ike ịgọnarị ịbanye na ndị na-enweghị ọgwụ mgbochi, ọbụlagodi ndị nwere ule na-adịghị mma.
Ndị uwe ojii agbasiwo mbọ ike ịwakpo ahia a adịgboroja asambodo ebe ọ bụ na ewepụtara ngafe ndị ahụ na June, ma guzobe otu pụrụ iche ka ha kpọpụsịa akwụkwọ adịgboroja.
Sistemụ asambodo dijitalụ nke EU - nke a na-enyocha asambodo onye ọ bụla yana dakọtara na igodo nzuzo nke ụlọ ọgwụ na ụlọ ọrụ ahụike nwere - na-eme ka ụgha sie ike karị, mana ọ gaghị ekwe omume.